အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ ၄၆ ကြိမ်မြောက် အစိုးရအဖွဲ့အစည်းဝေးပြုလုပ်၊ ပိုမိုခက်ခဲတဲ့ ခြေလှမ်းတွေ တက်လှမ်းပြီး ရန်သူကို အပြီးအပိုင်ချေမှုန်းရန် အချိန်ရောက်လာပြီလို့ ယာယီသမ္မတ ဒူဝါလရှီးလပြောကြား – PVTV Myanmar
အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ ၄၆ ကြိမ်မြောက် အစိုးရအဖွဲ့အစည်းဝေးပြုလုပ်၊ ပိုမိုခက်ခဲတဲ့ ခြေလှမ်းတွေ တက်လှမ်းပြီး ရန်သူကို အပြီးအပိုင်ချေမှုန်းရန် အချိန်ရောက်လာပြီလို့ ယာယီသမ္မတ ဒူဝါလရှီးလပြောကြား
အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရရဲ့ ၄၆ ကြိမ်မြောက် အစိုးရအဖွဲ့အစည်းအဝေးကို ဒီနေ့မနက် ၁၀ နာရီမှာပြုလုပ်ခဲ့ကြ ပါတယ်။ အစည်းအဝေးကို ယာယီသမ္မတ ဒူဝါလရှီးလ၊ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးချုပ် မန်းဝင်းခိုင်သန်းတို့ အပါအဝင် ပြည် ထောင်စုဝန်ကြီးတွေ၊ ဒုဝန်ကြီးတွေ တက်ရောက်ခဲ့ကြပါတယ်။
အစည်းအဝေးမှာ ယာယီသမ္မတ ဒူဝါလရှီးလက အစိုးရအဖွဲ့ဟာ နိုင်ငံတော်ရဲ့ လိုအပ်ချက်၊ ပြည်သူလူထုရဲ့ တောင်းဆိုချက်တွေနဲ့အညီ မင်းအောင်လှိုင်ဦးဆောင်တဲ့ စစ်ကောင်စီ အမြစ်ဖြတ် ချေမှုန်းရေး၊ ဖက်ဒရယ် ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံတော် တည်ထောင်ရေးတို့အတွက် နွေဦးတော်လှန်ရေးကို ဦးဆောင်နေကြတာဖြစ်တယ်။ အစပိုင်းမှာ မရှိမဖြစ်တဲ့ အစိုးရအဖွဲ့ကို ဖွဲ့စည်းပြီး ဖက်ဒရယ်ပဋိညာဥ်ပါ နိုင်ငံရေး ရည်မှန်းချက်တွေ အောင်မြင်ရေးအတွက် လုပ်ဆောင်လာခဲ့ကြတယ်။ ယခုအချိန်မှာ စစ်တပ်က ပြည်သူလူထုရဲ့ အသက်အိုးအိမ်၊ စည်းစိမ်ကို ကာကွယ်ရန် တာဝန်ကို လုံးဝ မထမ်း ဆေင်နိုင်တော့တာကို မြင်တွေ့ရပြီး တဖက်မှာလည်း ပြည်သူလူထုအနေနဲ့ ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ကို စနစ်တကျဖွဲ့စည်းပြီး စစ်ကောင်စီပြုတ်ကျရေးအတွက် နေ့စဥ် အင်တိုက်အားတိုက် လုပ်ဆောင်နေကြပြီဖြစ်တယ်။ အရှိန်အဟုန်လည်း အတော်ရရှိနေပြီဖြစ်တယ်လို့ ပြောပါ တယ်။
ကမ္ဘာ့ကုလသမဂ္ဂနဲ့ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ နိုင်ငံတကာမိတ်ဆွေတွေအနေနဲ့ အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် မြန်မာ့အရေးမှာ ထိရောက်စွာမကူညီနိုင်ကြပေမဲ့ မိမိတို့ ပြည်သူတွေ ကိုယ်တိုင်ရန်ပုံငွေထည့်ဝင်ပြီး တော်လှန်ရေးဆင်နွဲလာခဲ့ကြတာ အတော်ခရီးပေါက်နေပြီဖြစ်တယ်ဆိုတာနဲ့ ဒီအချိန်မှာ ပိုမိုခက်ခဲတဲ့ ခြေလှမ်း တွေ တက်လှမ်းပြီး ရန်သူကို အပြီးအပိုင်ချေမှုန်းရန် အချိန်ရောက် လာပြီဖြစ်တယ်လို့လည်း ပြောထားပါတယ်။
အစိုးရ အဖွဲ့ဝင်တွေအနေနဲ့ ပြည်သူလူထုရဲ့ အသက်အိုးအိမ်ကာကွယ်ရေးနဲ့ မင်းအောင်လှိုင်ရဲ့ စစ်ကောင်စီကို ချေမှုန်းနိုင်ရန် စိတ်ပိုင်းဖြတ်ပြီး၊ ရှိသမျှ ကိုယ်စွမ်းအား၊ ဉာဏ်စွမ်းအားဖြင့် ပူးပေါင်းလုပ်ဆောင်ကာ တော်လှန်ရေးကို အရှိန်အဟုန်မြင့်တင်ရန် လိုအပ်လာပါပြီ။ ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော် နဲ့တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင်များ အချင်းချင်းပိုမိုနီးကပ်ကာ နားလည်မှုရှိရှိနဲ့ စစ်ကောင်စီကို ဆက်လက်တိုက်ပွဲဝင်သွား ကြရမှာဖြစ်တယ်လို့ ယာယီသမ္မတကြီးကပြောပါတယ်။ ဒါအပြင် ယခုတော်လှန်ရေးအောင်နိုင်ဖို့ အရေး အကြီးဆုံးအရာက စိတ်ဓါတ်ခွန်အား ဖြစ်တယ်။ ဘယ်လောက်ပဲ ခက်ခဲပါလေစေ အနာဂတ်ဖက်ဒရယ် ပြည်ထောင်စု မြန်မာနိုင်ငံတော်သစ် တည်ဆောက်ရေးအတွက်၊ တရားမျှတစွာ ငြိမ်းချမ်းတိုးတက်သော နိုင်ငံတော်သစ် တည်ဆောက်ရေးတို့ကို မျှော်ရည်ပြီး မလျော့သော ဇွဲနဲ့ ဆက်လက် လုပ်ဆောင်ကြပါဖို့အတွက် လည်း ယာယီသမ္မတ ဒူဝါလရှီးလက တိုက်တွန်းထားပါတယ်။
နိုင်ငံတော်ဝန်ကြီးချုပ် မန်းဝင်းခိုင်သန်းကလည်း ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်း၊ မိုင်းကိုင်မြို့နယ် တအာင်း (ပလောင်) အမျိုးသားပါတီဥက္ကဌဖြစ်သူ မိုင်းနုမ်ဟန်၊ ၎င်း၏ ဇနီးနှင့် (၇)လအရွယ်သမီးတို့ ရက်ရက်စက်စက်အသတ်ခံ ထားရမှု၊ မတ်လ(၁၃)ရက်နေ့ (မြန်မာနိုင်ငံလူ့အခွင့်အရေးနေ့)မှာ ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနအနေနဲ့ ပြည်သူ့ခုခံတွန်းလှန် စစ် (၆)လပြည့်အစီရင်ခံစာကို ထုတ်ပြန်ထားမှု၊ ဒီကနေ့အထိပြည်သူတွေရဲ့ကူညီလှူဒါန်းမှု အမေရိကန် ဒေါ်လာသန်း ၃၀ ကျော်ရှိခဲ့ပြီး ဒီရံပုံငွေတွေအားလုံးရဲ့ ၈၅% ကျော်ကို စစ်လက်နက်ခဲယမ်းပစ္စည်းဝယ်ယူမှုနဲ့ ထုတ်လုပ်မှုတွေ အတွက် အသုံးပြုခဲ့ကြမှု၊ ဒါ့အပြင်ခုခံတွန်းလှန်စစ်မှာ အတူလက်တွဲဆောင်ရွက်နေကြတဲ့ မဟာမိတ်များနဲ့ မျှဝေ သုံးစွဲရမှုတွေကို ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
ဒါအပြင် အမေရိ ကန်အစိုးရရဲ့ ၂၀၂၁-၂၀၂၂ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်ဘတ်ဂျက်မှာ မြန်မာနိုင်ငံကို ထောက်ပံ့ဖို့ ဒေါ်လာ ၁၃၆ သန်းကျော်သတ်မှတ်ထားတယ်ဆိုတာနဲ့ အဲဒါက နှစ်စဉ်ထောက်ပံ့နေကျဘတ်ဂျက်ရဲ့ နဲနဲပဲပိုတိုး လာတာဖြစ်ပေမယ့် အရေးကြီးတာက အဖွဲ့အစည်းများကိုညွှန်းဆိုတဲ့ကိစ္စဖြစ်တယ်ဆိုတာ၊ အားလုံးပါဝင်တဲ့ အားလုံးကိုကိုယ် စားပြုတဲ့ ဒီမိုကရေစီစနစ်နဲ့ ဖက်ဒရယ်ပြည် ထောင်စုတည်ဆောက်ရေးအတွက် မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းက တိုင်းရင်းသားလူမျိုးစုများအကြား တန်းတူညီမျှရေးဆောင်ရွက်နေတဲ့ အဖွဲ့အစည်းတွေ ကိုညွှန်းဆိုရာမှာ အမျိုးသားညီညွတ်ရေး အစိုးရ (NUG)၊ NUCC၊ CRPH၊ CDM၊ EAOs တွေပါဝင်နေတာမို့ အင်မတန်အားတက်စရာကောင်းတယ်ဆိုတာနဲ့ ဒီဘတ်ဂျက်ဥပဒေအတည်ပြုပြီး ရက်ပေါင်း(၉၀)အတွင်းမှာ ကူညီထောက်ပံ့ရေး အစီအစဉ်တွေ ညှိနှိုင်းသွားမှာဖြစ်လို့ NUG အနေနဲ့လည်းသေချာပြင်ဆင်ဆောင်ရွက် သင့်တာတွေကို အစိုးရအတွင်းတိုင်ပင်ဆောင်ရွက်ထားဖို့ လိုအပ်နေပြီဆိုတာတွေကို ဝန်ကြီးချုပ်က ပြောကြားခဲ့ ပါတယ်။
အစည်းအဝေးမှာ အမျိုးသမီး၊ လူငယ်နဲ့ ကလေးသူငယ်ရေးရာ ဝန်ကြီးဌာနက Children affected in Armed Conflict Guideline ကိုတင်ပြခဲ့လို ဆက်သွယ်ရေး သတင်းအချက်အလက်နဲ့ နည်းပညာဝန်ကြီးဌာနက အမျိုး သားညီညွတ်ရေးအစိုးရဲ့ သတင်းနဲ့ ပြန်ကြားရေးဆိုင်ရာ မဟာဗျူဟာကိစ္စရပ်တွေကို တင်ပြဆွေးနွေးခဲ့ပါတယ်။
အဲဒီနောက် ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးချုပ်က တင်ပြလာတာတွေကို ပြန်လည်ရှင်းလင်းဆွေးနွေးပြီး အစည်းအဝေးကို ရုပ်သိမ်းခဲ့ပါတယ်။
ယင်းမာပင်မြောက်ခြမ်းရဲ့ ပြည်သူတွေကအကြမ်းဖက်စစ်တပ် ကျရှုံးရေး ဆန္ဒပြသပိတ်မှောက်
(၂၂-၀၅-၂၀၂၂) ရက်နေ့ ထုတ်လွှင့်မှုကဏ္ဍများ
အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီက ဖွင့်တဲ့ စာသင်ကျောင်းတွေမှာ လုံခြုံရေးအန္တရာယ်ရှိနိုင်လို့ ကျောင်းအပ်နှံခြင်းမပြုရန် မင်းတပ် ပ.အ.ဖ ကပန်ကြားချက်ထုတ်ပြန်
Ĵűčk Ĵäčk says:
2022-03-15 at 2:38 PM
အိုက္စ့္ … ေတာ္ကီေတြ ေလ်ာ့ ၿပီး … 😏😏😏
မီတင္ တခါ ထိုင္ ရင္ ပိုက္ဆံ ရ. မယ္ ဆို ထားစရာ ေနရာေတာင္ မ႐ွိေလာက္ဘူး… 😏😏😏
ကိုတင္ေမာင္တို႔လည္း …. ေအာက္ေမးလႈပ္ တာ ေလ်ာ့ၾကေတာ့ .. လက္ လႈပ္ ရ. မဲ့ ေန႔. ဘယ္ေတာ့ လည္း …
2022-03-15 at 2:41 PM
ထာဝရ လေးစားပါတယ် မြန်မာပြည် သူတို့ရဲ့အားကိုးရာအစိုးရသည် NUGဖြစ်သည်
အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ အဖွဲ့ ဝင်အားလုံးဘေရန်ကင်းပြီးအရေးတော်ပုံ အမြန်အောင်မြင်ပါစေ
ပြည်သူ့ခုခံ တော်လှန်စစ်သတင်းများ (၁၅၊ မတ်လ၊ ၂၀၂၂)